Colas nzungu: zvese zvaunoda kuziva - Afrikhepri Fondation
Chipiri, Nyamavhuvhu 4, 2020
Oomnipresent muhupenyu hwemagariro uye hutsika hweKwe, colatier muti wemichero wakaberekerwa kumasango eWest Kama. Tsvuku kana chena, colas ine hukama hwekuva nekuipisa uye hutsinye mukuravira. Iwo muchero wakakurumbira muKama. Inozivisa kusvika kwemwana parubhabhatidzo rwake, inorongedza kubatana kwemuchati uye chikomba kana kukudza mushakabvu panguva yemariro ake. Izvo zvaro zvikuru zvekurapa zvivhenganiswa zvakabatana nenyaya yekuti ine caffeine. Inosimudzira kutya uye yemuviri, aphrodisiac inowedzera kuramba kupera simba. Iyo inewo ine diuretic uye maradhi emakadhi. Zvinoitika kuva inoshanda shungu yekudzvinyirira.
Kola nut: kunaka kwayo uye zvinobatsira
Nyaya Kola, ari pod rine mbeu anonzi Kola Kola nzungu, izvo Dzakafanana cocoa, uye vanoyera pamusoro 25gr. The Kola nati ane unhu zhinji, refu vakaziva, kusanganisira Kama uye anotsigirwa nevanhu yokuora zvidzidzo. External kana womukati kushandiswa zvinangwa, chinofanira vakafunga kuti varape zvirwere zvakawanda.
Its kugutsikana akakwirira zvine caffeine uye kolatine, phenolic mushoma pamusoro Kola mupengo, chokwadi shasha tonic. Saka The Kola nati rinoshandiswa sechinhu antidepressant kuzorwa hypotension, pamusoro chikosoro, pamusoro mumuviri kana pfungwa kuneta sezvo cardiac tsandanyama rinodhaka uye tonic.
Iinewo chirwere chekudya uye diuretic. Inofanira kuonekwa kuti migumisiro yeola nut inonzwika kwenguva yakareba kupfuura yevamwe vanofadza, zvakadai sekofi kana guarana.
The Kola nati anogona vachangoona rikamunya muchindwi kana brewed pashure kukuya. Its zvinovava kunaka haakonzeri uparadze sezvingatarisirwa, asi ndiwo mabviro yakakurumbira pasoda akaberekerwa muUnited States uye rinoshandiswa nemamiriyoni evanhu. Coca cola Zvechokwadi zvakasikwa Dr. Pemberton, mishonga matende, kutsiva waini pamwe kunobatsira chinwiwa, yakagadzirwa coca mashizha uye Kola nzungu. The zvinwiwa ane haruchipo, mazuva ano, kana Coke kana cola.
Muti weKola unonzi mukurumbira. Nemhaka yehupfumi hwayo muAlkaloids: theobromine, caffeine, kolatin, mbeu yekhola chaizvo inoshanda senotyisa inotyisa. Muchirapa chemishonga, iyo inobatanidzwa ne ginger, iyo pachayo inozivikanwa nokuda kweaphrodisiac yayo.
Saka muranda weKola unogona kukurudzirwa kana zvisina kukodzera nhengo dzekubereka. Inowedzera kuwedzerwa kweropa mune zvepabonde uye zvino kunatsiridza kushanda kwezvikadzi, mumunhu. Madzimai, kola nut inogonawo kuva nemigumisiro yakanaka, kunyanya panguva yekuguma.
Cola nati poda - 100g (Hupenyu Hwakasimbiswa)
kubvira pana Nyamavhuvhu 3, 2020 10:43
Inosimbisa muviri nepfungwa
Inotaridzwa seitsvene kuWest Africa
Ichi chigadzirwa 100% chinoumbwa neakasarudzika akacheneswa ezvirimwa, akasununguka kubva pane zvese zvinogadzirwa zvinogadzirwa uye zvachose hapana chakawedzerwa. Inosangana nemhando dzakanaka dzekugadzira maitiro.
Indigo Herbs zvigadzirwa zvinobatsira iwe kuti uwane hutano hwakakwana uye hutano chaihwo.
Iwe wapindura"Colas nati: zvese zvaunoda kuziva" Maminitsi mashoma apfuura
Mind Parachutes: Vhidhiyo mavhidhiyo ekufambira mberi kwako
Rinda Mumwe Chete Achange Akavhiringidzwa: Yokupedzisira (2007)
Afrikhepri Foundation Sur Cherechedza Zvakananga Outta Compton (2015): "Bhaisikopo rakanaka kuona!" Aug 3, 15:57